BAKOOL: Ku dhawaad 30 ruux oo Gaajo iyo Haraad u geeriyooday | WARARKA PUNTLAND
Home Wararkii Hore akhriso BAKOOL: Ku dhawaad 30 ruux oo Gaajo iyo Haraad u geeriyooday
BAKOOL: Ku dhawaad 30 ruux oo Gaajo iyo Haraad u geeriyooday
Mas’uuliyiinta maamulka gobolka Bakool ayaa sheegay in 28 ruux, oo caruur iyo haween u badan Gaajo iyo Harraad ugu geeriyoodeen deegaano ku dhaw degmada Xudur.
Xuseen Sheekh Maxa’uud, oo kamid ah Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, kana soo jeedo gobolka Bakool ayaa sheegay in dadka intooda badan ay ku dhinteen deegaanka Buur-dhuxulle.
Wuxuu sheegay in cunto la’aan iyo biyo yari baahsan ay ka jiraan deegaannada Miyigi ah, oo intooda badan ay ka gureen Warihii Biyaha ku jiray, sidoo kalena ay qalaleen dhirtii ay xoolaha ku noolaayeen.
“Xaalada aad u xun, oo cunto iyo biyo la’aan ah ayaa ka jirto gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanada ay Kooxda Al shabaab maamusho, waxaa ku dhimatay 28 qof deegaanka Buur-dhuxulle maalmihii ugu dambeeyay,” Ayuu yiri Senator Xuseen.
Abaarta ka jirto dalka ayaa waxay aad u saamaysay dadka iyo duunyada ku dhaqan inta badan gobolada Soomaaliya, kadib markii la waayay 3 sano oo xiriir ah Roobabkii la filayay.
Hay’adaha gargaarka ayaa wada qaylo dhaan xooggan, kuwaasoo ka digay Macluul markale ka dhacda Soomaaliya, waxaana goobaha qaar ay Hay’adaha samafalka ka billaabeen cunto qeybin.
QM ayaa sheegtay in 6.2 Million oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini’aadanimo oo deg deg ah, si looga hortago in dadkaasi ay u dhintaan Gaajo, harraad iyo nafaqo darro ka dhalatay abaarta kulul.
Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Maxa’ed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladiisu mudnaanta kowaad siin doonta wax ka qabashada abaabrta ka jirto dalka.
This post has already been read 40524
Previous articleQM oo ka digtay khatarta abaaraha ka jira SomaliaXilli ay kasii darayso xaaladda abaareed ee ka jirta dalka Somalia, ayaa waxaa kordhaha baaqyada ay dirayaan ururada caalamiga ah kuwaasoo sheegaya in xaaladda dadka halis gali karto hadii aan lala gaarin gurmad deg deg ah. Hay’addaha Qaramada Midoobey ee UNICEF iyo WFP ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in abaartan isu badali karto macaluul baahsan oo ka dillaacda waddanka taasoo ay adkaan karto in wax laga qabto iyagoo codsaday in loo gurmado. Hay’adahaasi ayaa sidoo kale sheegay inta badan dadka Soomaaliyeed ay saameysay abaarta, islamarkaana ay la il daran yihiin cunto yari iyo Biyo la’aan. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu dalbaday malaayiin Dollar oo lagu caawinayo dadkaas iyagoo sheegay in gurmad deg deg ah loo baahanyahay
Next articleFarmaajo oo kulan deg deg ah isugu yeeray Hay'adaha Garsoorka iyo Maaliyadda